Moosend: Dhammaan Astaamaha Suuqgeynta Suuqgeynta Si Aad U Dhisdo, Tijaabiso, Ula Socoto, una Kobciso Ganacsigaaga | Martech Zone
Mid ka mid ah dhinacyada xiisaha leh ee warshadayda ayaa ah hal-abuurnimada sii socota iyo hoos u dhaca qiimaha leh ee istiraatiijiyadaha is-gaarsiinta suuq geynta casriga ah. Meeshii ganacsiyadu markii hore ku bixiyeen boqollaal kun oo doolar (walina ku sameeyaan) barnaamijyada waawayn… hadda kharashyadu si weyn ayey hoos ugu dhaceen halka astaamaha ay sii wanaajinayaan.
Waxaan dhawaan la shaqeyneynay shirkad fulineysa moodada shirkadaha oo diyaar u ahayd inay saxiixdo qandaraas madal ay ku kacayso in ka badan nus milyan milyan waxaanan kula talinay inay diidaan. In kasta oo madalku lahaa muuqaal kasta oo la miisaami karo, awoodda isdhexgalka, iyo taageerada caalamiga ah… ganacsigu hadda wuu bilaabanayay, xitaa ma uusan lahayn sumad, wuxuuna ku iibin jiray gudaha Mareykanka.
In kasta oo laga yaabo inay ahayd xal ku meel gaadh ah oo lagu dhisayo ganacsigooda, haddana waxaan ku helnay xalka qayb yar oo ka mid ah kharashka oo qaadan lahaa dadaal aad uga yar in la hirgeliyo. Tani waxay gacan ka geysan doontaa socodka lacagta ee ganacsiga, waxay ka caawin doontaa inay diiradda saaraan dhismaha calaamaddooda, waxayna ka caawin doontaa inay koraan dakhliga… iyadoon la jabin. Baahnayn in la sheego, maalgashadayaashoodu aad bay u faraxsanaayeen.
Moosend: Email Suuqgeynta iyo Suuqgeynta Qalabaynta
Celceliska ganacsiga ee raadinaya in lagu daro jiilka hogaaminta, si fudud loo dhiso loona daabaco emayllada, iyo sameysashada safarro otomatig ah oo suuqgeyn ah, oo cabbiro saameynta… waxaad ka heli doontaa wax kasta oo aad ugu baahan tahay Moosend.
Barxadku wuxuu la yimaadaa horay boqolaal jawaab celin ah, moodello emayl qurxoon iyo dhammaan otomaatiga aad u baahan tahay inaad ku bilowdo saacado halkii bilooyin.
Moosend: Jiid oo Reeb Email Dhise
Tifatiraha Moosend ee si fudud loo isticmaalo loona jiido & hoos u dhigo wuxuu caawiyaa qofkasta inuu abuuro joornaallo aqoonyahanno ah oo si fiican ugu muuqda aalad kasta, oo leh eber aqoon HTML ah. Iyada oo boqolaal tusaalooyin casri ah oo aad kala dooran karto, ololayaasha suuqgeynta iimaylkaaga ayaa loo labbisi doonaa guusha.
Moosend: Aaladaha Aaladda Suuqgeynta
Moosend waxay kaa caawineysaa inaad abuurto qulqulka shaqooyinka otomaatigga ah ee suuq geynta gaarka ah ee keena heerarka beddelka. Waxayna bixiyaan tiro diyaar ah cuntada si aan kuu bilaabo ... oo ay ka mid yihiin:
Qalabaynta Isticmaalaha Dusha Isticmaalaha
Otomaatiga Gawaarida ladiray
Otomaatiga Dhibcaha Lead
Qalab kasta wuxuu bixiyaa kiciyayaal, shuruudo, iyo ficillo si loo dhiso wax ka beddelka otomaatiga jira ama aad u dhisto taada. Kuwaaga waxay leeyihiin xaalado kicin badan, emayl soo noqnoqda, waqtiyo go'an oo sax ah, iyo / ama tibaaxyo, dib udajiya istaatistikada, wadaagida qulqulka shaqada, ku dar qoraalada, mideeya wadiiqooyinka iyo kormeera tirooyinka tallaabo kasta oo shaqo socod ah.
Mashiinka Moosend Raadi
Moosend: Is-dhexgalka Ecommerce
Moosend wuxuu leeyahay isdhexgal asal ah Magento, WooCommerce, ThriveCart, PrestaShop, OpenCart, CS-Cart, iyo Zen Cart.
Marka laga soo tago otomatiyada e-commerce ee caadiga ah sida Gawaarida dukaanka laga tagay qulqulka shaqada, waxay sidoo kale bixiyaan talooyin ku saleysan cimilada, talooyin wax soo saar shaqsiyeed, iyo talooyinka wax soo saarka AI-wada. Waxa kale oo aad u kala qaybin kartaa dhagaystayaashaada adoo daacad u ah macaamiisha, iibsigii ugu dambeeyay, suurtogalnimada inaad dib u iibsato, ama suurtogalnimada inaad ku isticmaasho tigidh.
Moosend: Bogga Soo Degida iyo Dhismayaasha Foomka
Sida emaylkooda dhisaha ah, Moosend wuxuu bixiyaa jiido & hoos u dhis bogga isku dhafan oo leh dhammaan foomamka iyo raadraaca aad filayso inaad wax fudud ka dhigto. Ama, haddii aad jeclaan lahayd inaad ku darto foom boggaaga ah, kaliya dhis oo ku dheji.
Waxaad ku fiirsan kartaa horumarkaaga rajadaada waqtiga-dhabta ah - dabagalka ayaa furmaya, dhagsiinno, wadaag bulsho, iyo ka-saarid la'aan.
Moosend: Shakhsiyeynta Xogta Lagu Wado
Shakhsiyeynta shakhsi ahaaneed waa mid ka mid ah ereyada badanaa loo adeegsado qalabaynta suuqgeynta. Moosend shakhsi ahaaneed ma aha oo kaliya cusbooneysiinta goobaha gaarka ah ee ku jira macluumaadka emaylka, waxaad sidoo kale isku dari kartaa talooyinka ku saleysan cimilada, badeecooyinka gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale inaad geliso sirdoon macmal ah si aad u isticmaasho adigoo kugula talinaya alaab ku saleysan dhammaan martidaada habdhaqankeeda iyo suurtagalnimada inay wax iibsadaan. Qeybinta Moosend gudaheeda ayaa sidoo kale ka baxsan emails, bogagga degitaanka, iyo foomamka.
Moosend wuxuu leeyahay API aad u adag, wuxuu bixiyaa foomka rukunka WordPress, waxaa looga faa'iideysan karaa iyada oo loo marayo SMTP, wuxuu leeyahay aaladda Zapier, iyo tan kale oo ah CMS, CRM, Liiska Xaqiijinta, Ecommerce, iyo Iskudhafka Jiilka Lead.
Isdiiwaangeli Moosend Bilaash
Bixinta: Anigu waxaan ku xiran ahay Moosend oo waxaan isticmaalayaa xiriiriyeyaal ku xiran maqaalkan.
Tags: Gawaarida dukaanka laga tagayqalabayntaCS-Cartemayllada daacadnimada macaamiishatifaftiraha jiido oo hoos u dhigotomatiga ecommercesuuq geynta ecommerceemail dhiseEmail Marketingboosteejo email ahadeeg bixiyaha adeegga emaylkagaar ahaanqaab dhismetifaftiraha bogga soo degitaankamagentosuuq-geynta suuqasocodka shaqada suuqgeyntaMoosendfur furanPrestaShopThriveCartwoocommercecuntooyinka socodka socodkaCart Zen